Kedu uru m ga-ahụ ma azụrụ m YouTube Shorts Views?
Ihe kpatara ị ga-eji zụta ihe nlele YouTube Shorts ka ọ bụrụ #1
Vidiyo dị na ịntanetị na-achịkwa mpaghara mgbasa ozi ọha na eze ugbu a. A na-ekwudị na vidiyo dị irè karịa ọdịnaya dị na ahịa ịntanetị. Ya mere, ndị niile na-ere ahịa na ịntanetị ga-achọ iji YouTube dị ka usoro ịzụ ahịa.
Ịzụta echiche mkpirisi YouTube bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kwalite vidiyo gị. Ịzụta echiche YouTube, mgbe ejikọtara ya na atụmatụ ndị ọzọ dị ka njikarịcha vidiyo ma ọ bụ ịzụta mgbasa ozi YouTube, nwere ike inye vidiyo gị nkwalite kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ụfọdụ uru ịzụrụ mkpirisi YouTube iji kwalite vidiyo gị.
Ọkwa dị elu na YouTube yana Google's Search Engines. Otu akụkụ a na-elegharakarị anya bụ na echiche YouTube nwere ike imetụta ọkwa nchọ vidiyo gị nke ukwuu. Were ya na ịzụrụ ihe nkiri YouTube maka vidiyo gị. N'okwu ahụ, ọ na-ebuli ọnụ ọgụgụ nke nlele na vidiyo gị, na-eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama na ịnweta ọnọdụ na ndepụta vidiyo ndị a tụrụ aro maka ndị na-ekiri ya.
Ntughari emelitere gaa na CTA: Ịzụta echiche YouTube nwere ike ịkwalite olu okporo ụzọ organic nke ọdịnaya gị dọtara. Ọ bụrụ na ọtụtụ echiche na-elele vidiyo gị, ọ nwere ike gbaa ndị ọzọ ume ka ha lelee ya wee pịa njikọ ọ bụla ị nwere na nkọwa gị, wee mee vidiyo gị.
Na-enye gị ohere itinye uche na ihe ndị ọzọ: Ịzụta nlele YouTube na-ewepụ ibu dị n'ubu gị. Ị nwere ike ilekwasị anya na atụmatụ dị iche iche, gụnyere àgwà ọdịnaya gị na akụkụ ndị ọzọ nke mgbasa ozi ahịa. Ị gaghị echegbu onwe gị maka ndị na-ekiri ọwa gị. Echiche ndị a na-akwụ ụgwọ ga-edozi nke a maka gị.
See ihe nkiri Organic: Ndị mmadụ na-eche banyere "Ọ bụrụ na ọ nweghị onye ọzọ na-ekiri vidiyo, gịnị kpatara m ga-eji nwee ike imebi oge m wee lelee ya?" Ngosipụta nlegharị anya ga-egosi ogo ọdịnaya gị yana, ya mere, ga-adọta ndị na-ege ntị organic ma nye vidiyo gị ohere ịkpọ ya n'uju.
Ị na-akwalite ntụkwasị obi nke ika gị na mgbasa ozi ọha: Mgbe mmadụ chọpụtara na vidiyo gị nwere ọtụtụ echiche, a na-arata ya ma kpalie ya ilele ma nụ ozi gị. Nke a nwere ike ịga ogologo oge iji guzobe ọkwa gị dị ka onye okike nke ọdịnaya dị elu. Ntụkwasị obi n'etiti ọha mmadụ dabere na aha gị na ama ama gị. Nlele YouTube na-enye gị ama ama ị chọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-erite uru nke ndị asọmpi gị, etinyela uche na ọdịnaya gị naanị. Ọ dị mkpa iji bulie ọhụhụ nke ọwa gị site na ijikọta atụmatụ dị iche iche. Ịzụta echiche YouTube so na atụmatụ ndị a nwere ike inyere gị aka inweta ihe kachasị na YouTube. Kedu ihe ị na-egbu oge? "Na YouTube, ihe abụọ ọ bụla dị mkpa."
Kedu ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji azụta ihe nlele YouTube Shorts?
Ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị na-azụta nlele mkpirisi ka ha na-enye vidiyo ha ntụkwasị obi ozugbo, na-egosi na ọ bara uru ikiri. Na mgbakwunye, ọ na-enyere aka ịbawanye ogo YouTube na Google gị na-abawanye okporo ụzọ organic.
Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ nkebi ahịrịokwu na-egosi vidiyo gị dị ka otu n'ime nsonaazụ ọchụchọ mana ọ nwere ike ịhụ na ọ bụ mmadụ ole na ole hụrụ ya, ha nwere ike ileghara ya anya kama gaa na nke nwere echiche kacha. Ọbụlagodi na vidiyo gị nwere ike bụrụ ihe ọmụma ma ọ bụ nwee ike nwetakwu echiche, agbanyeghị, ọ gaghị enwe ike ịnweta ọtụtụ okporo ụzọ organic ebe ndị mmadụ nwere echiche nke "Ọ bụrụ na ọ nweghị onye ọzọ na-ekiri ya, ọ gaghị abụ ezigbo vidiyo."
Ya mere, ịzụrụ echiche, mmasị na nkọwa na vidiyo gị dị elu ga-ahapụ ya ka ọ malite ịnata nnabata sitere n'okike kwesịrị!
Ee, anyị nwere ike ịnapụta ihe karịrị otu nde echiche!
Anyị na-enye echiche otu nde dị ka ego kachasị elu ị nwere ike zụta n'ibe a maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Agbanyeghị, ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ha metụtara ikike anyị ikwupụta echiche ndị a. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta otu nde YouTube nlele ma ọ bụ 100 nde nlele, anyị nwere ike ịnye ha.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ ihe karịrị nde mkpirisi YouTube 1, kpọtụrụ anyị n'ọnụ ọgụgụ nlele nke ị nwere mmasị ịzụta. Anyị ga-eji ọnụ ahịa ahaziri azaghachi.
Ọ bụrụ na ịzụtara echiche YouTube n'aka anyị, nsonaazụ na-amalitekarị ịpụta na vidiyo gị n'ime awa 24 ruo 72 ka emechara iwu ahụ, nsonaazụ ga-aga n'ihu na-apụta kwa ụbọchị.
Anyị na-enye nnyefe na ọnụego n'etiti 1,000 na 50,000 echiche kwa ụbọchị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ị na-enye iwu maka nlele 1,000, ọ nwere ike were n'etiti awa 24 ruo 72 iji malite na otu ụbọchị iji mechaa ego niile. Dị ka nlele ndị ọzọ ị na-azụta, ka ọ ga-ewe oge iji mezue usoro gị n'oge.